Voadarodaroka ny fahalalahan-gazety ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2018 3:22 GMT
Hatramin'ny nirodanan'ny didy jadona Marcos tamin'ny taona 1986, nosokajiana toy ny amin'ireo malalaka indrindra manerantany ny gazety Filipiana. Saingy tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nahatsikaritra fanafihana miely patrana amin'ny fampahalalam-baovao Filipiana ireo vondrona samihafa. Mpanao gazety maro avy amin'ny faritany no maty novonoina. Nakaton'ny governemanta efa ho herinandro ny gazety tamin'ny taona lasa. Manakorontana mpanao gazety ny Fianakaviana Voalohany (Fianakavian'ny Filoha) amin'ny fitoriana tranga fanalàm-baraka eny amin'ny fitsarana.
Pinoy Press manonona fanambarana avy amin'ireo mpanao gazety izay niampanga ny Lehilahy Vadin'ny Filoha ho mamerina mamaritra indray ny fanalam-baraka:
“Tena miahiahy tanteraka izahay fa tsy mampiasa ity fitoriana fanalam-baraka ity mba hitady fanarenana ara-drariny ny Lehilahy Voalohany (vadin'ny filoha), Mike Arroyo. Fa mamerina mamaritra indray ny atao hoe fanalam-baraka, fanafihana ankarihary ny gazety Filipiana. Araka ny fantatsika, ny fitsapana fanalam-baraka dia ny fisian'ny faharatsiana. Saingy tsy manaja ity fitsipika fototra ity Atoa Arroyo ary mampiasa tsy am-pitandremana ny fanalàm-baraka mba handrahonana sy hanampenam-bava ny gazety. Ny hafatra azonay dia izao: ny zavatra rehetra izay maneho tsikera momba ny Lehilahy Voalohany na heverina fa fitantarana tsy manome vahana ireo asa ataony dia “fanalam-baraka.” Raha ny tena izy dia manakana ny zon'ny vahoaka hahazo vaovao mikasika ny zavatra mahaliana azy ireo izy. “
Freedom Watch milaza amin'ny antsipirihany mikasika ny valintenin'ireo mpanao gazety:
Mihoatra ny antsasany tamin'ireo mpanangom-baovao, mpamakafaka, tonian-dahatsoratra sy mpamoaka lahatsoratra miisa 45 notorian'ny Lehilahy Voalohany, Jose Miguel Arroyo tamin'ny fiampangana fanalam-baraka no niara-nametraka fitoriana taminy ihany koa. Sambany no nisy izany tao Filipina, fitoriana sivily sady fitoriana iombonana. Mangataka fanarenana fahavoazana noho ny fanahiana, fahaverezan'ny fidiram-bola sy ny voka-dratsy hafa nateraky ny fitoriana fanalam-baraka napetrak'Atoa Arroyo ity fitoriana iombonana ity. Saingy milaza ihany koa izany fa tsy niteraka tsy fahitan-tory teo amin'ireo olona nanaovana fanadihadiana ity fitoriana ity fa niteraka fiantraikany ratsy teo amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ihany koa.”
Mikasika ny vaovao mifandraika amin'izany ihany, mitatitra ny Southeast Asian press alliance fa nahazo fandrahonana ho faty ny mpisolovava miandraikitra ny fitoriana ilay rangahy vadin'ny filoha.
Nanao fanentanana fanangonan-tsonia hanalana ny fanalam-baraka tsy ho ao anatin'ny heloka bevava ny vondrona mpanao gazety:
“Ny isa nanamontsana ny teo aloha tamin'ny raharaha fitoriana napetrak'Atoa Arroyo no nanasongadina fa manararaotra ny lalàna momba ny fanalam-baraka ny matanjaka ao amin'ity tany nolovaina ity mba hanakonana ny zo demaokratikan'ny gazety tsy hikaroka ny marina ho an'ny tombotsoam-bahoaka sy ny zon'ny vahoaka hahafantatra. Izany ihany koa no tohan-kevitra tsara indrindra hanesorana tsy ho heloka bevava ny lalàna efa lany daty izay tsy nampiasaina firy hiarovana ny tsy manan-tsiny fa mba hiarovana ireo meloka. Mangataka amin'ny Kaongresy izahay mba hiasa avy hatrany hanafoana ny lalànan'ny fanalam-baraka, hanaisotra izany ao anatin'ny lisitry ny fehezan-dalàna momba ny heloka bevava, amin'ny maha-adidy nianianana mba hanamafisana ny demaokrasia simba tanteraka sy voaloto hatrany.”
Bryanton Post manoratra ny tatitra manerantany manasokajy ny taona 2006 ho toy ny “taona ratsy indrindra ho an'ny gazety tao anatin'ny folo taona mahery”. Manome rohy momba ny toetoetry ny gazety ao Filipina ihany koa ny Inside PCIJ:
“Mpanao gazety 13 no maty tamin'ny herintaona, ka nahatratra 49 ny isan'ny mpiantsehatra amin'ny fampahalalam-baovao namoy ny ainy nanomboka tamin'ny nahatongavan'ny filoha Gloria Macapagal-Arroyo teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2001. Mihoatra an'io isa io ny isan'ny maty nandritra ny fitondran'i Marcos (1965-1986). Mahatonga ny firenena ho toerana mampidi-doza indrindra eran-tany ho an'ny mpanao gazety, faharoa manaraka an'i Irak izany toe-javatra izany. “